Man United oo guuldarro kala kulantay Newcastle United, xilli uu sare u kacay cadaadiska saarnaa tababare Solskjaer…. + SAWIRRO – Gool FM
Man United oo guuldarro kala kulantay Newcastle United, xilli uu sare u kacay cadaadiska saarnaa tababare Solskjaer…. + SAWIRRO
(Newcastle) 06 Okt 2019. Newcastle United ayaa saddexda dhibcood kaga qaadatay kooxda Manchester United garoonkeeda St James’ Park, kaddib markii ay kaga adkaatay 1-0, ciyaar ka tirsaneyd kulmada 8-aad ee horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, xilli uu sare u kacay cadaadiska saarnaa tababare Solskjaer.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray barbaro 0-0 ah.
Daqiiqadii 72-aad Matthew Longstaff ayaa hogaanka u dhiibay kooxdiisa Newcastle United, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1-0, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Jetro Willems.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo idlaatay 1-0 ay Newcastle United kaga adkaatay kooxda Manchester United oo marti ku aheyd garoonka St James’ Park, taasoo ka dhigeysa inay sare u sii kacday cadaadiska saarnaa tababare Ole Gunnar Solskjaer.
Arsenal oo saddexda dhibcood kaga qaadatay Bournemouth Emirates Stadium, Xilli Manchester City dhagta ciida loo daray … +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka adag Derby d'Italia kooxaha Inter Iyo Juventus ee horyaalka Serie A